✞ Minyengetero yevanoda vakafa - UniProyecta
Takanyora nhevedzano yeminamato uye makotesheni ebhaibheri kuti averenge zvinonzwika (kana muchivande) zvichingodaro chema kurasikirwa nemufi afa: amai, baba, nhengo yemhuri, shamwari. Isu tinonzwisisa kuti idzi nguva dzinogona kuve dzakaoma kwazvo.
Ishe anonzwa kuchema kwako uye munguva pfupi uchava murugare. Tinovimba izvozvo minamato ine simba iyi inogona kunyaradza iwe nemhuri yako mune ino yakaoma mamiriro.
1 Chinyorwa cheminamato yemufi
1.1 Munamato wekuti mweya uzorore murunyararo
1.2 Munamato waamai kana baba
1.3 Munamato wekuchema
1.4 Munamato wehama / hanzvadzi
2 Zvinotaurwa neBhaibheri nezvemufi
Chinyorwa cheminamato yemufi
Munamato wekuti mweya uzorore murunyararo
Tinokutendai Ishe nekupfuura kwehama / hanzvadzi yedu. Tinosimudzira zita renyu nekuda kwehupenyu hwakanaka hwaairarama. Tinokumbira imi, o Ishe, kuti mupiwe hupenyu husingaperi. Uye paanoramba ari mubindu Rako, rega vatumwa vako vabate izvo zvaasingakwanise kubata zvakare. Baba garai nemweya wavo uye vazorore murunyararo rusingaperi rwakakwana. Ameni
Munamato waamai kana baba
Vanodiwa Baba, ndinokutendai nekuchengeta baba vangu / amai panguva yehupenyu hwavo pasi pano. Ndinokutendai nekuvapa mukana wekuuya neni munyika muno uye ndinokutendai nemukana wekuwana munamato uyu. Ndiri kufara muhupenyu hwaakatungamira muhupenyu nemabasa akanaka aakaita. Ishe Mwari, ndinonamatira mweya wababa vangu / amai vangu vakashaika uye nekuvachengeta panzira yavo kuenda kuHumambo hwenyu hutsvene. Ndinokutendai nekunzwa minamato yangu, oh Lord, Amen.
Ishe Mwari, muri kumusoro, isu, vana venyu vanozvininipisa, tinopfugama pamberi penyu nhasi mukuremekedza. Tinoziva kuti ndimi mukuru uye ndimi mambo wemadzimambo ese. Saka, tinokukumbira kuti simudza moyo yedu nemweya yedu kuti tikwanise kurasa kusuwa kwedu, oh Lord. Tipeiwo simba rekukunda mamiriro aya. Hapana munhu anofa usina Iwe kutaura kudaro uye saka tinofara mukukunda uku uye tinokukumbira Iwe kuti uve pamwe neakafa mukoma / hanzvadzi. Tinokutendai nemunamato wapindurwa uye muzita raJesu, Ameni.
Munamato wehama / hanzvadzi
Kubva pane izvo zvandinoyeuka, hama yangu / hanzvadzi anga ave neni kuburikidza neese kumusoro uye kuderera kwehupenyu. Takadya nekutamba tese, taipanana mazano uye hapana chatakavanza. Zvino, nekuona kuti aenda, ndinonamata kuti ndiwane hupenyu hwusingaperi uye mufaro usingaperi mukumbundikira Kwako kune simba. Ndinokukumbirisa kuti uchengete mukadzi / murume / vana / hupfumi hwako paPasi uye kuti Kutarisa kwako hakushanduke, oh Lord. Ndinokutendai nemunamato uyu uye muzita raJesu, ndinokukumbirisai. Ameni.
Zvinotaurwa neBhaibheri nezvemufi
(VaHebheru 2:14) Saka, sezvo vana vakatora chikamu munyama neropa, iye akabatawo zvakafanana, kuparadza nerufu uyo ​​aive nehumambo hwerufu, ndokuti dhiabhori,
(VaHebheru 2:15) uye kusunungura vese avo, nekuda kwekutya rufu, vakave pasi pehusungwa muhupenyu hwavo hwese.
Chekupedzisira, munaVaRoma, tinogona kuwana kumwe kutaurwa. Isu tinovimba kuti idzi nguva dzakaoma dzekuchema ipfupi uye kuti iwe unogona munguva pfupi kudzoka zvakajairika muhupenyu naMwari, Ishe wedu:
(VaRoma 8: 23Uye kwete iye chete, asi nesu vo, tine chibereko chekutanga chemweya, tinogomera mukati medu, tichimirira kuitwa kwedu vana, ndirwo rudzikunuro rwemuviri wedu.
kudzidziswa » tsika nemagariro » Minyengetero yemudiwa yaenda